Facebook မှာ Verify Code ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ်တောင်းခြင်း — MYSTERY ZILLION
Facebook မှာ Verify Code ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ်တောင်းခြင်း
January 2013 edited January 2013 in Internet & Email
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Facebook အကောင့်အသစ်လုပ်တဲ့အခါတိုင်း အရင်လို အဆင်မပြေပဲ Verify Code ကို ဖုန်းထဲ Text Message ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က မြန်မာနိုင်ငံကနေ သုံးတာမို့ ကျနော့် WCDMA ဖုန်းနံပါ်တ်ကိုပဲ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာ Text Message မှ Facebook မှ ပို့မလာပါဘူး။ ဒီအဆင့်မှာတင် Verify လုပ်မရလို့ဆိုပြီး ရှေ့ဆက်ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။ အဲဒါဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမလဲ ခင်ဗျာ။ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြပါဦး ခင်ဗျ။ နိုင်ငံရပ်ခြားက ဖုန်းတွေနဲ့ လုပ်ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်က မြန်မာကနေသုံးတော့ မြန်မာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်လို့များ Text Message မပို့တာလားလို့ ယူဆမိပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေလည်း မရှိတော့ အကူအညီတောင်းဖို့ရာလည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော့် နည်းတူပဲ အခုနောက်ပိုင်း Facebook အကောင့်အသစ်လုပ်သူတချို့လည်း ဒီလို ပြဿနာတွေ တွေ့ကြုံရတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေပဲ Verify Code ရအောင် ဘယ်လိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးဗျ။
January 2013 Registered Users
We can't receive SMSmessage from other country.
So ask some friend in other country to ask their phone number and reply you in chat or mail instantly.
March 2013 Registered Users
SMS ကိုမြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နည်းကတော့ သူတို့ Phone နံပါတ်တောင်းတယ့်အခါမှာ ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ ပြန်ထွက်ပြီးတော့ Email Verify လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ၁၅ ရက်အကြာ စောင့်ပေးပါ။ ၁၅ ရက် ကြာရင်တော့ Auto Facebook အကောင့်က ပွင့်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လက်တွေ့မလို့ပြောတာပါ။
Email Verify ေတာင္လားေအာင္ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲဗ်ာ..ကို ကံေဇာ္..